Bandowyada iyo waajibaadka maaskaro ayaa dib looga soo celiyay Romania iyadoo ay jirto COVID-19 qalliin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Romania » Bandowyada iyo waajibaadka maaskaro ayaa dib looga soo celiyay Romania iyadoo ay jirto COVID-19 qalliin
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Romania • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Romania ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, oo madax ka ah Waaxda Xaaladaha Degdegga ah (DSU), Raed Arafat.
Romania waxay hadda ku dhex jirtaa xaaladii ugu xumayd ee caafimaad abid tan iyo markii uu bilaabmay masiibada caalamiga ah ee COVID-19.
Bandowga habeenkii iyo waji-xidhka qasabka ah ayaa dib loogu soo celiyay Romania iyadoo kiisaska COVID-19 ay sii kordhayaan.
Laga bilaabo 10pm ilaa 5 subaxnimo,dhaqdhaqaaqa dadka oo dhan waa ka mamnuuc dalka oo dhan.
Gelitaanka dhammaan dhismayaasha dadweynaha iyo dhammaan hawlaha guud iyo dhacdooyinka waxaa loo oggolaan doonaa oo keliya dadka haysta 'shahaadada cagaaran'.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Romania ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, oo madax ka ah Waaxda Xaaladaha Degdegga ah (DSU), Raed Carafaat, ayaa shaaca ka qaaday in dowladda dalka ay dib u soo celineyso bandowga habeenkii ah iyo awaamiirta waji-xidhka ee dhammaan goobaha bulshada.
"Laga bilaabo 10pm ilaa 5:00am, dhaqdhaqaaqa dadka waa laga mamnuuci doonaa dalka oo dhan," madaxa DSU ayaa ka sheegay shir jaraa'id, isaga oo qeexaya ka reebanaanshaha kuwa la tallaalay ama dhawaan ka soo kabsaday COVID-19.
Romania ayaa hadda ku dhex jirta xaaladdii ugu xumayd ee abid soo marta xaalad caafimaad tan iyo markii uu billowday cudurka safmarka ah ee COVID-19.
Laga bilaabo maanta, xirashada waji -xidhka waji -ka -hortagga waa qasab Romania, gudaha iyo bannaanka goobaha dadweynaha, iyo sidoo kale goobta shaqada iyo gaadiidka dadweynaha, ayuu yiri Carafaat.
Gelitaanka dhammaan dhismayaasha dadweynaha iyo sidoo kale dhammaan hawlaha dadweynaha iyo dhacdooyinka waxaa loo oggolaan doonaa oo keliya dadka haysta 'shahaadada cagaaran'.
Tallaabooyinka cusub ee kantaroolka ee ay dejiyeen mas'uuliyiinta ayaa dhaqan galaya Isniinta soo socota muddo 30 maalmood ah, ayuu yiri Carafaat.
Xaalada faafa ee Romania si degdeg ah u xumaaday ilaa dabayaaqadii Sebtembar, daboolida tallaalka oo aan ku filnayn oo keliya 30 boqolkiiba iyo u hoggaansanaan la'aanta tillaabooyinka ilaalinta ayaa la rumeysan yahay inay yihiin sababaha ugu waaweyn ee qalliinka.
Toddobaadkan, dalka bariga Yurub wuxuu diiwaangeliyay rikoor maalinle ah oo COVID-19 ah oo cusub oo ah 18,863, iyo 574 dhimasho ah.